Olole looga hortegayo shilalka dhallinyarada oo soo batay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Olole looga hortegayo shilalka dhallinyarada oo soo batay
La daabacay måndag 17 juni 2013 kl 11.37
Sawirle: Josef Björklund/Sveriges Radio
Shilalka dhallinyarada ka soo gaara goobaha shaqada ayaa saddexdii sano oo isku xiga soo kordhayey. Sannadkii la soo dhaafayna waxaa shilal ka shacay goobaha shaqada awgood jirro isku qoray dhallinyaro tiradoodu dhan tahay 3870 oo qof. Dhallinyaradaanna waxay da’doodu ka hooseysey 25 sano. Laga soo bilaabo sannadkii 2009 waxay dhallinyarada jirrada isku qora shil shaqo awgiis kordheen boqolkiiba 48.
Hay’adda bey’adda shaqooyinka ayaa hadda bilaabeysa olole wax looga beddelayo arrintaas. Waxaa ka mid noqonaya in la dardar geliyo kormeerada lagu sameynayo goobaha dhallinyaradu ka shaqeeyaan. Waxayna tani qayb ka tahay olole ballaaran oo wacyi-gelin ah oo loogu talagalay in dhallinyarada lagu baraarujiyo ammaanka goobaha shaqada. Sidaasna waxaa yiri Håkan Olsson oo madax ka ah qayb ka mid ah hay’adda bey’adda shaqooyinka oo hadalkiisa ku sii daray:
- Waxaan u arkaa in ay tahay wax aan la yaraysan karin in shilalka dhallinyarada ku soo gaara goobaha shaqadu ay soo kordhaan. Dhallinyaradaan waxaa hadda u bilaabaneysa noloshada shaqada, marka in shaqada ay shilal ku soo gaaraan waa wax khatar ah oo laga murugoodo.